तिहार सुरु, कुन दिन के को पूजा ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ श्रावण २०७७, आईतवार २३:५९ English
तिहार सुरु, कुन दिन के को पूजा ?
काठमाडौँ, ८ कार्तिक । तिहार आजदेखि सुरु भएको छ । तिहार सुरु भए पनि कागपूजा भने भोलि गरिँदै छ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने तिहार अर्थात् यमपञ्चकको पहिलो दिन आज बेलुकी यमदीपदान शुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
यस वर्ष यमदीपदान शुक्रबारदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार कात्तिक ९ गते शनिबार परेको छ । धनवन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शनिबार परेको छ । कात्तिक १० गते आइतबार बिहान नरक स्नानसहित कुकुर पूजा र बेलुकी लक्ष्मीपूजा गर्नुपर्नेछ ।
कात्तिक ११ गते गाई, गोरु र आत्म (म्ह) पूजा परेको छ । ११ गते बिहान ९ः४३ बजेसम्म औँशी तिथि छ । त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले म्ह पूजा यसैदिन गर्न पञ्चांग निर्णायक समितिले सुझाएको छ ।
कात्तिक १२ गते मङ्गलबार तिहारको मुख्य दिन भाइटीका परेको छ । बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको उत्तम साइत परेको छ ।
८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:०८ मा प्रकाशित